Lasa Sakafo Ny Niafaran’Ilay #SpyDuck Tao Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Lasa Sakafo Ny Niafaran'Ilay #SpyDuck Tao Ejipta
Voadika ny 09 Septambra 2013 6:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Deutsch, Français, русский, عربي, Aymara, Italiano, فارسی, English
Takatra fotsy mitovitovy amin'i Menes. Saripika tao amin'ny Wikimedia Commons, ampiasaina noho ny Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.
Takatra nohelohina ho dokotra manao asam-pitsikilovana sy nosamborina tao Ejipta no niafara ho sakafo tao amin'ny ankohonana ejipsiana iray.
Nivoaka tany Ejipta ny vaovao fisamborana dokotra mpitsikilo iray tamin'ny 31 Aogositra, izay nitondra fitaovana mampiahiahy amin'ny volony. Taty aoriana dia nisongadina fa hay takatra, izay nomena anarana hoe Menes, ilay dokotra, ary nentina hanaovana fanadihadiana amin'ny fianarana ilay fitaovana fitsongoan-dia.
Tamin'ny 4 Septambra i Mostafa Hussein nanambara fa “navotsotra ilay takatra nampangaina amin'ny tsy marina”:
navotsotra ilay takatra nampangaina amin'ny tsy marina.
Fotoana fohy ihany ny fihorakoraha-pifaliana.
Mitatitra amin'izao fotoana ilay bilaogera Ejipsian Zeinobia:
Tsy fantatro hoe izany ve no lahatra sa ahoana, fa tena tantara mampalahelo tokoa ny tantaran'i Menes teto amin'ny tanin'i Neily.
Taorian'ny niampangana azy ho nanao fitsikilovana sy lany andro iray tany amin'ny fonja ejipsiana, dia navotsotra izy nefa nitondra azy ho any amin'ny fara-androny izany !! Voafandrika sy nohanin'ny fianakaviana Nobiana iray tany atsimon'i Ejipta izy
Nanampy teny tao amin'ny Facebook ny Fikambanana Mpitahiry ny Natiora ao Ejipta:
Vaovao mampalahelo : Nisy namono ilay takatra fotsy Menes.
Taorian'ny famotsorana azy tao amin'ny toerana voaaron'i Salugah & Ghazal andro vitsivitsy izao, dia nisidina nanakaiky ny nosy iray tao Neily izy, ka tao no nahasamborana azy sy nihinanan'ireo mponina tambanivohitra azy
Manazava ny lahatsoratra:
Sakafo fihinanan'ny Nobiana an'arivony taona izao ny takatra, noho izany tsy hoe fomba naningana ny fihinanana takatra. Saingy, ny fahombiazana vetivety tamin'ny famotsorana an'i Menes dia tsy ampy niantohana azy ho tafavoaka mora an'i Ejipta
Ary goavana kokoa sy toe-draharaha:
Nanana olana momba ny fihazana tsy voafehy hatry ny ela i Ejipta. Saingy zava-dehibe ny mandanjalanja ny filàn'ny fokonolona isan-toerana sy ny fiarovana ny natiora sy ny zavamiaina.
Nanao fehinteny ny lahatsoratra:
Mbola lavitra ny lalana alehan'ny faritra iray manontolo, indindra eo amin'ny fanairana momba ny fihazana sy ny vorona mpifindramonina